Toyota ရဲ့ ၂၀၁၉ Avalon Touring အလှပုံရိပ်များ – AutoMyanmar
Toyota ရဲ့ ၂၀၁၉ Avalon Touring အလှပုံရိပ်များ
၂၀၁၉ Toyota Avalon Touring ဟာဆိုရင် Detroit Motor Show မှာ Toyota မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Avalon grade တွေထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ Limited, Touring, XSE, XLE ဆိုပြီး grade ၄ ခုနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး Avalon limited ရဲ့ပုံရိပ်အချို့ ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ website မှာဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဖော်ပြသွားမှာကတော့ Touring grade ရဲ့ပုံရိပ်တွေပါ။
ကျွန်တော်အခုဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ 2019 Avalon Touring ရဲ့အလှပုံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆက်ထားတာမကြာသေးတဲ့ Model အသစ်တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးပဲ ကြိုက်လောက်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ XSE, XLE အလှပုံတွေကလည်း မကြာခင်အချိန်မှာ website ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Toyota တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲအခြား Automaker တွေဆီက Model အသစ်ထွက်ရှိလာရင်လည်းအခုလို Photo collections လေးနဲ့ (သို့) သတင်းအနေနဲ့ ဖော်ပြသွားဖို့ အစီအစဉ်တွေရှိတာကြောင့် မကြာခဏလာလည်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
Avalon 2019 grade ထဲမှာ မိတ်ဆွေရဲ့အကြိုက်က Touring လား ဒါမှမဟုတ် Limited လား? ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို အောက်မှာ ကွန်းမန့်လေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
Tough choice: Touring or Limited? Introducing the all-new 2019 #Avalon. #NAIAS pic.twitter.com/8Se54O7kMM
— Toyota USA (@Toyota) January 16, 2018
Features , New Models
Photo Collections, Toyota